၁။ ကုန်ပစ္စည်းအမည် / အမည်ပြောင်
Epoxy coated ဝါယာကြိုး ကွက်, epoxy အပေါ်ယံပိုင်းကွက်, electrostatic အပေါ်ယံပိုင်းကွက်, ဟိုက်ဒရောလစ် filter ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကွက်, ဟိုက်ဒရောလစ် filter ကိုကွက်, ဟိုက်ဒရောလစ် filter ကိုသတ္တုကွက်, filter ကိုထောက်ခံမှုကွက်, epoxy ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်ကွက်။
စက်မှု epoxy coated wiremesh ကိုအဓိကအားဖြင့်ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်လေစစ်စစ်ထုတ်စက်များနှင့်စစ်ထုတ်သည့်အရာများ၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ မြို့ပြ epoxy ပိုက်များသည်မြင့်မားသောလူနေအိမ်များရှိ anti-theft screen များအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ပုံသွင်းမှုသည်အထူးသဖြင့် eposty mesh resin အမှုန့်များကို electrostatic ပက်ဖြန်းခြင်းဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုအလွှာများမှယက်လုပ်သောဝါယာကြိုးကွက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စုပ်ယူသည်။ အပူချိန်နှင့်အချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက် epoxy resin အမှုန့်သည်အရည်ပျော်။ အလွှာ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖုံးအုပ်ကာကာကွယ်ထားသောသိပ်သည်းသောအပေါ်ယံလွှာကိုဖွဲ့စည်းသည်။ များသောအားဖြင့်အလွှာသည်သံမဏိကွက်၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကွက်၊ ကာဗွန်သံမဏိကွက်များရှိသည်။ epoxy ဗဓေလသစ်မှုန့်တွင်အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ပိုင်းအမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ (အထူးသဖြင့်အရောင်များအပါအ ၀ င်) စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်၏ 3. ထူးခြားချက်များ:
မျက်နှာပြင်ကိုပြုပြင်ပြီးနောက်, interweaving အမှတ်ကို fixed, ကွက်ယူနီဖောင်းနှင့်စတုရန်းဖြစ်ပါတယ်, အတိုင်နှင့်ယုန်ဒေါင်လိုက်ဖြစ်ကြပြီး, ကလျှော့ပေးရေးနှင့်ပုံပျက်သောမလွယ်ကူသည်နှင့်ထောက်ခံမှုအင်အားခိုင်ခံ့; ကွက်မျက်နှာပြင်သည်ပျော့ပျောင်း။ ဖွဲ့စည်းရန်လွယ်ကူသည် ကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာပြင်အရောင်များကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်အရောင်ပတ်ပတ်လည်နှင့်ယူနီဖောင်း။
ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ခဲတံခိုင်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဆားမှုန်ရေမွှားစစ်ဆေးခြင်း၊ အမှုန့်ကော်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ကွေးနေသောပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆီခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် YKM သည်လွတ်လပ်စွာဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်အကြီးစားမျက်နှာပြင်ကုသမှုထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပူသောလေလည်ပတ်မှုစနစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင်တည်ငြိမ်သောအပူထုတ်လွှတ်မှု၊ ညီမျှမှု၊ လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုစသည်တို့ပါဝင်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် ၅၀,၀၀၀ m2 အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုသည်တစ်နေ့လျှင် ၁၅ သန်း m2 ခန့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်နောက် ၁၀ နှစ်အတွင်းထုတ်လွှတ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စက်ရုံများရှိသည်။ ဖြတ်စက်များ၊ ဆလိုက်များ၊ splicers နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်မူလအသားတင်ဇာထိုးစက်များအစရှိသည့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
၁။ ၎င်းသည်ရေတွင်နှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့်ချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိဟိုက်ဒရောလစ်ဆီမီဒီယာအမျိုးမျိုးမှအပူချိန်နှင့်အချိန်အမျိုးမျိုးတွင်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားအထူးဟိုက်ဒရောလစ် filter ပစ္စည်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
2. ASTM B117-09 ဆားရေမှုန်ရေမွှားစစ်ဆေးမှုစံသတ်မှတ်ချက်အရရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ 96H မျက်နှာပြင်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ရှိလေထုစစ်ထုတ်စက်များအတွက်သင့်လျော်ခြင်း၊
၃။ ခိုင်ခံ့သောကော်ကပ်မှု၊ H တန်းခဲတံစစ်ဆေးမှု၊ ၁ ကီလိုဂရမ် / ၅၀ စင်တီမီတာသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှု၊ ဖြတ် ဖြတ်၍ စမ်းသပ်ခြင်း၊
4. မြင့်မားသောကွေးခုခံနိုင်မှု, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအက်ကြောင်းမရှိဘဲ, 1mm curvature ၏အချင်းဝက်နှင့်အတူသံမဏိလှံတံဖြင့်ခေါက်နိုင်ပါတယ်;
၅။ ကုန်ပစ္စည်းကိုချော်ပြီးတဲ့နောက်၊ ရုပ်ရှင်ပြိုကွဲပြီးနောက်အစွန်းဝါယာကြိုးအနားစွန်းကပြုတ်ကျသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။